အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ဖိုင်တွေ - ငါတို့သည်စပိန်နိုင်ငံလုပ်နေကြတယ်
စပိန်လျှောက်လုံးအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ထုတ်ကုန်။ သငျသညျမဆိုအခြားအထက်ကိုချစ်စေလိမ့်မည်ဟုစပိန်အစားအစာ။ Iberico ဝက်ပေါင်ခြောက်သိမ်းသွားလေ၏, သာရွာ, သကြားလုံး, liqueurs နှင့်ပိုပြီးအတွက်လုပ်ကြသည်အပိုဗာဂျင်းသံလွင်ဆီအရည်အသွေး Gourmet ဒိန်ခဲ!
Camino အဆီများ Albacete ထံမှ Hannibal အရည်အသွေး Gourmet
တွင် Posted 29 ဇန်နဝါရီလ 2019 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 By HBမှတ်ချက်
Hannibal သမိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဗျူဟာတွေထဲကဖြစ်လူသိများနေတဲ့ Carthaginian ယေဘုယျခဲ့များနှင့်အထူးသဖြင့်မိမိအဆင်နှင့်အတူနီဇ်မှတဆင့်၎င်း၏ကျမ်းပိုဒ်သည်။ သူကသံလွင်အာရှရပင်ကြီးထွားလာရှိရာမြေယာအာဖရိကကျော်ကြားယူသောလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့် Way ကို၎င်း၏အမည်ကိုကြာ Hannibal စားသုံးဆီ ဆက်ဖတ်ရန်
Teruel ဝက်ပေါင်ခြောက်တရားမျှတ, အရည်အသွေးနှင့်အစဉ်အလာ
တွင် Posted 15 ဇန်နဝါရီလ 2019 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 By HBမှတ်ချက်
မြို့တော် Teruel ထံမှ 35 ကီလိုမီတာ, မြစ် Mijares ခြင်းဖြင့်ချိုးမြေများနှင့် ပတ်သက်. Cedrillas turolense ၏မြို့တော်စည်ပင်ကမှာထူးခြားသော Teruel ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဧရိယာကိုအခြားဝက်သားကုသပေးခဲ့၏။ Cedrillas Sierra SL ၏တရားမျှတသော, ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်တံဆိပ် Hams ကဧရိယာမှာရှိတဲ့တခြားထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်မိမိကိုမိမိဝေးကွာထားပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန်
ရစ်ချတ် Branson နဲ့သဲကန္တာရကျွန်းပေါ်တွင်ဟာရီကိန်းသွားဝိုင်
တွင် Posted9ဇန်နဝါရီလ 2019 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 By HBမှတ်ချက်
Necker ကျွန်းကဒီနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Irma ဟာရီကိန်းခဲ့င်း၏လမ်းကြောင်းအတွက်အရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖြစ်ပျက်ရှိရာဗာဂျင်ကျွန်းတွင်တည်ရှိပြီးစားပြီးဘီလျံနာရစ်ချတ် Branson, ၏ပုဂ္ဂလိကကျွန်း၏အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Irma55 အမျိုးအစားအပေါ်တစ်ဦးဟာရီကိန်း၏တဦးတည်းကြောင်းမှတ်သားရပါမည် ဆက်ဖတ်ရန်
စပိန်အတွက် Discover စေ! စပိန်ထုတ်ကုန်များအတွက်သင်၏အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်။ ဥရောပမှတင်ပို့ရောင်းချမှု
နောက်ဆုံးပေါ် entries တွေကို
Bierzo ဝိုင်, ကမ္ဘာပေါ်မှာဖက်ရှင်များ၏ဇာစ်မြစ်၏သတ်မှတ်ရေး
Ribera del Duero ကနေရှေးခယျြ Pradorey ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း,
စားနပ်ရိက္ခာ & ဝိုင် Store က
မူပိုင် All Rights Reserved အဓိကအကြောင်းအရာ: ဂဲဝေး Lite ကိုအားဖြင့် Themeinwp